Prislọ mkpọrọ Tasm taa Ihe Nketa Worldwa | Akụkọ Njem
Prislọ mkpọrọ Tasmanian, taa ihe nketa ụwa
Otu n'ime steeti ndị mejupụtara Australia bụ Asụsụ Tasmaniaka. Ọ bụ agwaetiti nke dị kilomita 240 na ndịda nke agwaetiti ahụ ma ị rute ebe ahụ ị ga-agafe Bass Strait. Ọ bụ nnukwu agwaetiti ma bụrụkwa akụkụ nke agwaetiti nwere ihe karịrị narị agwaetiti atọ pere mpe. Ọ bụ ụwa n'onwe ya na njem na Australia abụghị nke zuru oke na-enweghị Tasmania.
Ileta Australia na Tasmania Ọ na-ewe oge, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya, ị ga-ahazi ya nke ọma ma ọ bụ nwee opekata mpe ụbọchị 20. Nke ahụ bụ Australia nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya, n’etiti ugwu, oke ọhịa na Great Barrier Reef, paradaịs na-ekpo ọkụ pụrụ iche n’ụwa. Yabụ, ị ga-ama site n'otu ebe gaa ebe ọzọ ịkọ ọtụtụ ebe njem nleta dị ka o kwere mee, mana ihe dị iche na Tasmania bụ ya ụlọ mkpọrọ ndị ọchịchị ochie. You maara na mpaghara Bekee a dị anya bụ na mbụ isi mmalite ahụhụ siri ike?
Nke ahụ bụ otú ọ dị. Mgbe ahụ, ụlọ mkpọrọ nke England ochie juputara na mgbe ahụ. Theda ogbenye na ịda ogbenye site na uto na-enweghị isi sitere na Mgbanwe Ọchịchị wee tụbara ndị nkịtị n'obodo, ịda ogbenye na ịkpa aghara. Iziga ha n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa dị ka nhọrọ kachasị mma ma si otú a ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ọtụtụ ụmụaka gafere osimiri wee rute Australia na Tasmania. Taa, enwere ike ịme ka a Njegharị Plọ Mkpọrọ Akụkọ Tasmania. Debanyere aha?
A na-eme atụmatụ na ihe dị ka puku mmadụ iri asaa wetara ihe narị afọ nke 70 mara dị ka Van Diemens Ala, Tasmania ugbu a. Ma n'ezie enwere ndị akaebe dị jụụ na akụkọ ahụ nwere ọtụtụ isi akụkọ. N'ebe ọwụwa anyanwụ Njegharị Plọ Mkpọrọ Akụkọ Tasmania Ebumnuche icheta ha ma ya mere anyị nwere ike ịga leta mmadụ ise ebe UNESCO kwuputalarị saịtị saịtị ụwa:
Cascades Women'slọ Ọrụ Women'smụaka
Linglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nnyocha Darlington
Ala Brickendon & Woolmers
Ememe Ncheta Ncheta
Ka anyị hụ nkenke ihe akụkọ nke ọ bụla n'ime ebe ndị a metụtara Tasmania omempụ akụkọ ihe mere eme. N'ihe banyere Port arthur (foto dị n'elu), anyị nwere ọtụtụ ụlọ na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ngosi ihe nka na-emeghe n'èzí. Enwere ụlọ karịrị 30, nke mkpọmkpọ ebe ma weghachi, nke ụlọ mkpọrọ rụrụ ọrụ n'etiti 1830 na 1877 na nke mmadụ 12.700 gafere. Enwere hectare 40 njem ọ dịkwa ihe dị ka kilomita 60 site na Hobart. Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla n'afọ na tiketi na-akwụ ụgwọ AU $ 37, na-adị irè maka ụbọchị abụọ.
La Cascades Women'slọ Ọrụ Women'smụaka (nke dị n'elu), dị na Hobart ma bido na 1828. Ọ rụrụ ọrụ ruo 1856 ma bu n'obi iwepụ ụmụ nwanyị na mmetụta ọjọọ nke obodo ahụ. Ihe dị ka puku ụmụ nwanyị iri abụọ na ise gafere ebe a. Saịtị ahụ na-emeghe kwa ụbọchị n’afọ ma nwee njem njegharị. Ihe Linglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nnyocha Darlington Ọ dị na Isla María ma rụọ ọrụ n'etiti 1825 na 1832. buildingslọ ya dị egwu ma na-awụ akpata oyi. Ndị mkpọrọ ahụ na-arụ ọrụ, ha anọghị n'ebe ndị nweere onwe ha nọ na n'ihi ụzọ dị anya ha enweghị ike ịgbapụ.
Brickendon ọ bụ ma ka bụ ugbo taa na-arụ ọrụ. Ma mgbe ahụ, ugbo a na onye agbata obi ya, Ndị na-egwu mmiriHa nwere ọtụtụ ndị mkpọrọ na-arụrụ ha ọrụ: iwu ụlọ, ihicha ụlọ, ịkọ ihe, na ihe ndị ọzọ. I nwedịrị ike ịnọ na-ehi ụra n’otu n’ime ụlọ ochie ndị a. Ọ dị ihe dị ka nkeji nkeji 20 si Lauceston, obodo ọzọ dị na Tasmania. Maka akụkụ ya na Agwaetiti Sarah Enwekwara ụlọ mkpọrọ ma enwere ike ịga leta ha. E nwere mkpọmkpọ ebe n’ebe niile a maara n’oge gara aga "Ọnụ ụzọ ámá nke hel".
El Akwa Richmond Ọ bụ ndị mkpọrọ tụrụ ya. Ọ dị na Richmond, obodo dị kilomita iri abụọ na ise site na Hobart, a gụnyere ya na Usoro nke Ndị Mkpọrọ Tasmanian ma ọ bụ vzọ Nkwenye. A ka na-arụ ọrụ ya ma ndị mkpọrọ wuru ya n'ime afọ abụọ, site na 25 ruo 1823. Ewu ya siri ike ma ndị mkpọrọ enweghị ike ihi ụra.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Tasmania dị anya sitere n'ọbara ya na ọbara na ahụhụ. Soro Kpebie ilzọ ọ bụ ụzọ kachasị mma ịghara ịhapụ ala a mara mma n'amaghị akụkọ zuru ezu. Vzọ Mbibi o Ilzọ Ndị Mkpọrọ O nwere ngụkọta kilomita iri abụọ na ise na akụkụ ụfọdụ nke Hobart, na-agafe Richmond, Tasman National Park, Eaglehawk Neck na Port Arthur Historic Site. Ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị atọ ma ndị a bụ ụzọ:
site na Hobart ruo Richmond enwere kilomita 27
site na Richmond ruo Port Arthur dị kilomita 83
site na Port Arthur ruo Hobart dị kilomita 95
Otu esi aga Tasmania? Ọ dị mfe, ịnwere ike iji ụgbọelu na obodo ọ bụla nke Australia ma ọ bụ na ị nwere ike ịhapụ Melbourne n'ime otu n'ime ụgbọ mmiri ndị ama ama n'ụwa, ndị Mmụọ nke Tasmania. Ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ ala, ịnwere ike iburu ya, ọ bụrụ na ịnwe igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, ịnwere ike ịgbazite ụlọ nwere akwa ma ọ bụ jiri akpa ụra gị hie ụra n’elu ụlọ. Gafe Bass Strait dị jụụ ma nwee obi ụtọ.
Mmụọ nke Tasmania na-ejikọ Melbourne na Davenport na ọnụego ahụ dabere ma ị na-eme njem n'ụgbọ ala, ma ị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ma ị na-eme njem naanị, otu ụzọ ma ọ bụ njem. Maka ụbọchị ndị a, njem njem na-enweghị ụgbọ ala nwere ike ịbụ ihe dị ka dollar 86 nke Australia na-ahapụ na 7: 30pm.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Oceania » Australia » Prislọ mkpọrọ Tasmanian, taa ihe nketa ụwa
Ihe kpatara ichota Galifia na Galicia
Trasmoz, bụ obodo Spanish a bụrụ ọnụ na nke a chụpụrụ